Fitaovana hisafidianana sary ao amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Fitaovana hisafidianana sary ao Photoshop matihanina amin'ny tetikasanao sary rehetra, ity programa fanovana sary mahafinaritra ity dia manana tsara katalaogin'ny fitaovana mifantina ampahany amin'ny sary, na dia atambatra izy ireo mba hahitana vokatra tsara indrindra.
Mianara mifantina ampahany amin'ny sary ary esory ny toerana misy anao miaraka amin'ny fitaovana tsara indrindra Photoshop amin'ny fomba iray tena mora. Ampiasao ireto fitaovana fifantina ireto hanatsara ny famerenana sary ny sary sy ireo tetik'asa sary rehetra nataonao.
Hianarantsika izany hampiasa ity manaraka ity fitaovana fanidiana de Photoshop:
Hianarantsika izao manaraka izao hevitra ao amin'ny Photoshop:
Misafidiana ampahany manokana amin'ny sary
Fafao ny vola
Teknika amin'ny fisafidianana sary tena maizina na tena maivana
1 Fitaovana fifantina Photoshop
1.1 Famatorana fitaovana
1.1.1 Lozika andriamby
1.1.2 Lasso polygonal
1.2 Fitaovana penina
1.3 Fitaovana wand
2 Fitaovana hanesorana ny afara avy amin'ny sary
2.1 Fitaovana fifantina
2.2 Fitaovana famafana majika
3 Teknika amin'ny fisafidianana sary tena maizina
Fitaovana fifantenana Photoshop
Phoptoshop manana andiany fitaovana amin'ny fisafidianana entana, ny tsirairay amin'izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny tanjona hafa izay hiova arakaraka ny filàna ananantsika, tsy mitovy izany fafao ny ambadika amin'ny color fiaramanidina izay fafao amin'ny endrika ny irayIzany no antony tsy maintsy ahalalantsika hoe ho an'ny inona ny tsirairay amin'izy ireo. Ny tsirairay amin'ireo fitaovana ireo dia manana ambaratongam-pahasarotana hafa.
Ny lehibe indrindra fitaovana hisafidianana Photoshop Izy ireo dia:
fifandraisana: andriamby, polygonal, loop. | fahasarotana ambany
ny resaka majika | tena sarotra ambany
volom-borona | fahasarotana antonony
Ao anatin'ity fitaovana ity no ahitantsika karazany telo:
Ny loopy magnetika dia fitaovana taloha mamorona safidy sarotra kokoa amin'ny alàlan'ny fampiasana teboka kely izay apetaka amin'ny faritra mitovy amin'ny sary, dia marina izany mora ampiasaina satria saika mandeha ho azy ny programa.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia safidio ny fitaovana lasso magneto hita ao amin'ny menio ankavia, raha vantany vao voafidinay izany, ny zavatra manaraka ataontsika dia ny manomboka manao ny fifantenana amin'ny alàlan'ny fampiharana fampiharana.
Rehefa misafidy isika, ny zavatra mahazatra dia ilay fitaovana no manao ilay teboka mandeha ho azy, raha ilaina asio teboka vitsivitsy mila manao fotsiny isika Click miaraka amin'ny totozy, mamela antsika ity takelaka ity ovay ny làlan'ireo teboka an'ny fitaovana ity.
rehetra fitaovana lasso dia manana safidy hanao safidy amin'ny ampahany, Midika izany fa afaka misafidy faritra iray isika ary avy eo miaraka amina fitaovana hafa na iray ihany, misafidy ampahany hafa. Azontsika atao ny mahita an'io safidy io eo amin'ny menio ambony indrindra amin'ny fitaovana lasso.
Rehefa te hanao isika fifantenana haingana amin'ny endrika sarotra be afaka mampiasa ny fitaovana lasso polygonal isika, mamorona ity fitaovana ity tsipika mahitsy amin'ny teboka miaraka amin'ny valiny haingana sy marina rehefa tsy sarotra be ny safidintsika.
Tsotra ihany ny fampiasana azy, aloha Misafidy ny fitaovana izahay avy eo mamorona teboka.
Raha te-hanao a fifantenana amin'ny tanana afaka mampiasa ny fitaovana lasso izahay, mamela antsika ity fitaovana ity misafidiana singa iray toa ny borosyl. Mora ny fampiasana azy satria mifantina ny fitaovana fotsiny isika ary avy eo mamorona ilay fifantenana amin'ny tanana. Fa maninona no ampiasaintsika io fitaovana io? SATRIA haingana sy marina izy io raha manana pulsa tsara (na takelaka)
Ny fitaovan'ny penina dia fantatry ny fandaharana Adobe noho ny fahaizany lehibe manao fomba isan-karazany. Io fitaovana io dia mamela antsika mamorona fifantina tena marina rehefa efa haintsika tsara ny mahafehy tsara ilay fitaovana. Tsotra ny fampiasana azy nefa mitaky fampiharana vitsivitsy izay ho azontsika rehefa mandeha ny fotoana, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mifantina ny fitaovana penina ary manomboka mamorona teboka amin'ny sarinay, isaky ny manome hevitra isika azontsika atao ny manova ny fiolahana raha mitazona ny totozy isika. Azo atao koa izany ovao ireo hevitra rehefa vita izany. Tsy misy isalasalana, rehefa mahay mifehy an'ity fitaovana ity ianao dia lasa manam-pahaizana amin'ny alàlan'ny fisafidianana Photoshop.
Rehefa vita ny fifantenana tsirairay dia voatahiry ao amin'ny faritra misy sosona ary afaka mifidy azy io indray isika isaky ny maniry. Raha irintsika fafao ny lafika ny azontsika atao dia mifantina invert mifantina ny zava-drehetra afa-tsy izay nofidinay tamin'ny fitaovana penina, Avy eo mamafa izahay ary esorina ny fiavianay.
Raha mitady isika mamorona sary fifantina haingana izay tsy dia sarotra loatra afaka mampiasa ilay fitaovana isika ny resaka majika, miaraka amin'ny tsotra Click tsy misafidy izy io.
Fitaovana hanesorana ny afara avy amin'ny sary
Imbetsaka isika no misafidy izay tadiavintsika dia esory ny toerana misy ny sarinay, esory ny background ny ampahany voafantina ihany no tazomy, hanao izany dia azontsika ampiasaina misy fitaovana fifantina ary aorian'izay hamafana ny fiaviana miaraka amin'ny safidy mifantina invert, na afaka mampiasa ny siligaoma de Photoshop.
Raha tianao izany fafao ny fiaviany ny azonao atao dia ny misafidy ny sary aloha ary hamafana ny ao ambadika. Mba hanaovana izany dia mila manao zavatra roa ianao:
Safidio ny sary tianao tazomina (mampiasa fitaovana rehetra)
Ampiasao ny safidy mifantina invert
Mamorona ianao fisafidianana endrika voalohany avy eo ianao mankany amin'ny menio ambony ary mitady ny safidy fifantina mifamadika, dia mila manome fotsiny ianao hamafa ary hamafa ny zava-drehetra afa-tsy izay nofidinao.
Fitaovana famafana majika
Mamela antsika ny fitaovana famafana majika fafao ny kitapom-bolanao amin'ny tsindry tokana, ity karazana fitaovana ity dia tena ilaina rehefa te-hamafa a fisaka loko fisaka tsy misy pitsopitsony.
Teknika amin'ny fisafidianana sary tena maizina
Imbetsaka isika no hahita sary maivana be na maizina be ary rehefa manandrana misafidy dia sarotra ho antsika izany, rehefa mitranga izany dia afaka manao fika kely ianao manamora ny asa fifantenana.
Ny tokony hataontsika dia mamorona sosona fanitsiana miolakolaka ary ovao ny sary mba ho maivana na maizina kokoa. Ity dingana ity dia mamela antsika jereo ny antsipirian'ny sary tsara kokoa aorian'izay dia manaova ny fizotran'ny fifantina amin'ny fitaovana rehetra. Aorian'ny fanaovana ny fifantenana, ny sisa ataontsika dia mamafa ny fanitsiana mba hijanonan'ny sarintsika amin'ny endriny voalohany.
Fitaovana fifantina rehetra Photoshop azo ampiasaina toggle to misafidy sarotra ary ataovy mora kokoa ny asanay. Tokony hahafantatra azy rehetra isika ary hahafantatra ny fomba fiasan'izy ireo hahafahany manao izany ampiasao tsara ireny amin'ny tetik'asa sary ho avy rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Fitaovana hisafidianana sary ao amin'ny Photoshop